Ukuthola i-EcoFellows - Then and Now - Centre for EcoTechnology
Njalo ngonyaka kusukela ngo-2012, ama-EcoFellows aphothulile aye emathubeni athokozisayo emikhakheni ehlukahlukene. Ukuze ufunde ukuthi ama-EcoFellows ethu ka-2020-2021, u-Ozette noJared, bekwenzeni, funda ku!
Kwakukuhle ukuhlangana noJared Shein. Uhole uhlelo lwethu lwe-Virtual Outreach Programme wasebenza kanzima ukusetha indinganiso yezethulo ze-CET, phakathi kweminye imisebenzi eminingi. Ngokuhamba konyaka, wafunda nokuthi ungayenza kanjani indawo yokubeka iphakethe ngempumelelo ngokuqukethwe okubandakanyayo. Uthe lokhu "ngakho-ke, kuwusizo olukhulu" lapho efuna izinyathelo ezilandelayo ngemuva kwesikhathi sakhe e-CET. Ubuye futhi wabonga ngabeluleki bakhe abamsize ekuhloleni amathuba emisebenzi ngasekupheleni konyaka. UJared uthe ukhumbula ukusebenza neThimba Lezokuxhumana kakhulu, ikakhulukazi u-Ozette, asebenza naye. Laba bobabili ngokungangabazeki benza i-duo enamandla!
UJared manje usebenza e-Ohio e Abasunguli beBrite Energy njengochwepheshe wabo wokuqalisa kokuhlangenwe nakho. Lapho, usiza ochwepheshe abasha bamandla ezinkampanini zokuqalisa ukwakha umkhiqizo wabo, kusuka kumodeli kuya emakethe. Ngokungena emakhonweni wokuxhumana nawokuxhumana afundwe ku-EcoFellowship, uJared ubelokhu ebeka izincomo zezinsizakusebenza zeBrite kumakhasimende. Ngokuqondisa izinkampani zephothifoliyo ekukhuleni okusimeme, usiza ukukhuthaza amandla ahlanzekile futhi asebenzayo.
Uma ubheka emuva, uJared wabelane ukuthi akazange aqale umsebenzi wakhe azi ukuthi ufuna ukuya kuphi. Manje, uzizwa elondekile lapho eya khona. “Ubudlelwano bangikhanyisela ukuthi umsebenzi wakho akumele ube iphupho elilodwa lokuthi wazi impilo yakho yonke. Iningi labantu lithatha uhambo lomsebenzi, hhayi indlela. Ngifunde ukuthi awudingi ukwazi noma ube nomsebenzi wakho wamaphupho njengamanje, nje ingqondo yokufuna isinyathelo esilandelayo lapho ufuna ukuya khona. “UJarede namazwi akhe okuhlakanipha azophuthelwa!
U-Ozette Ostrow, omunye u-2020-2021, naye wachaza nangendlela ubudlelwano be-CET obamlungiselela ngayo umsebenzi wakhe omusha. Indima yakhe entsha iseReduction in Motion, njengoSustainability Consultant. Manje uqhuba umsebenzi esizeni, esiza izibhedlela ukubhekana nodoti wazo wezempilo olawulwayo, kanye nemizamo yazo yokuvuselela kabusha. Imfundo nokubonisana ngokuncishiswa kukadoti kwakha izici ezibalulekile zomsebenzi wakhe.
I-CET isiza amabhizinisi ngokujwayelekile kunamabhizinisi aqondene nokunakekelwa kwempilo. Kodwa-ke, u-Ozette uzizwa ukuthi akufundile e-CET kukuhumushele kahle emsebenzini wakhe omusha. Lokhu kungenxa yokuthi wayehlonyiswe ngolwazi olufanele. Ukusebenza nomphakathi nokufunda ukuthi angafundisa kanjani kangcono abanye kwaba lusizo olukhulu ekuthuthukiseni kwakhe ubuchwepheshe. Ngokuqondile, ukwazi ngokucubungula imfucuza ukuze isetshenziswe kabusha kusabalulekile emsebenzini wakhe. Kunokuningi okugqagqene emsebenzini walezi zinhlangano ezimbili. "Ukwehliswa kweMotion kumayelana nokusiza amabhizinisi ukuthi anciphise udoti wawo, nokuyingxenye yenjongo ye-CET." Uyakhumbula u-Ozette.
Uhlanganyele ukuthi ubudlelwano bumhlomisa ngolwazi olunolwazi ikakhulukazi kwezokumaketha nokuxhumana. Njengomuntu othile, wazuza ekufundisweni, futhi wakha namakhono njengokuxhumana okugxile eqenjini. Amakhono wokuxazulula izinkinga nokulawulwa kwesikhathi awathole e-CET kumsizile kakhulu.
Yize izinhlelo zakhe zekusasa zingaqinisiwe, u-Ozette ubalule ukuthi futhi unentshisekelo ekusimameni kwezinkampani futhi ucabanga ukulandela i-MBA. Noma yini ayinqumayo, siyazi ukuthi lo muntu wakudala omangalisayo uzoqhubeka nokugqama!
Hlangana nabantu bakulo nyaka!
Sekuyisikhathi sokwamukela omunye umzuliswano wama-EcoFellows eqenjini eliseCentre for EcoTechnology! Uhlelo lwe-EcoFellowship yisikhundla sobudlelwano esikhokhelwe sonyaka owodwa sokusebenza nabasebenzi be-CET namanye ama-EcoFellows ukwenza imisebenzi ehlukahlukene ephathelene nezinhlelo zesimo sezulu nezinhlelo zezemfundo eNtshonalanga Massachusetts. I-EcoFellows isekela imizamo ye-CET yokusiza abahlali, izitshudeni, izikhungo kanye namabhizinisi esifundeni sonke ezinhlelweni eziqhubekayo ekusebenziseni amandla kagesi, izinsizakalo zamandla asekhaya, amandla avuselelekayo, kanye nokwehliswa kwemfucuza ngokusebenzisa kabusha, ukusebenzisa kabusha nokwenza umquba. I-EcoFellowship ibuye inikeze ngamathuba okuthuthuka kobungcweti kulaba abasanda kuthweswa iziqu zasekolishi, ibakhuthaza ukuthi bazibandakanye nokufinyelela emphakathini, ezinhlelweni zesikole, kanye nezinye izinhlangano zemvelo.
Ngingumhlali waseMinnesota impilo yami yonke, njengamanje ngizinze endaweni ephakeme yedolobha laseMinneapolis. Saziwa ngokuthi “Izwe Lamachibi Ayizi-10,000 XNUMX,” ngakho-ke akukho ukusweleka kwemisebenzi yangaphandle yokwenza lapha! Ngingathanda ukusho ukuthi uthisha wami wokuqala kwakuyinsimu yami. Ngichithe ihlobo eliningi lokuhamba kwami ​​ngisemncane phakathi kokuzibandakanya kukabhontshisi nokubuka ama-bumblebees athola impova okra. Ukukwazi ukudla ukudla engangizikhulisele kona ngisemncane kangaka kwafaka ilukuluku lokufuna ukwazi ngemvelo nalokho engangikufunda kamuva ukubizwa ngokuthi imvelo yabantu. Bengihlale ngizwa umthwalo onzima wokunakekela umhlaba, futhi yilokho okwangiholela ekutheni ngenze iziqu ze-Environmental Studies eMacalester College.
Yize ngangazi ukuthi yini engifuna ukuyenza, kwakudingeka ngenze okuningi ukuthola ukuthi yini engangifuna ukuyenza ngqo emkhakheni obanzi wezemvelo. Ngaba nenhlanhla yokuthola ama-internship amaningana ahlobene unyaka nonyaka angifundisa izifundo ngokushintsha kwesimo sezulu, ukusebenza kwezemvelo, kanye nobuholi bezemvelo. Ukukwazi ukuthuthukisa isitayela sami somsebenzi kunginike amandla okwenza umthelela omuhle emiphakathini yami. Ngazama izindlela eziningi zomsebenzi, kusuka ku-ethnobotany kuya ekwakhiweni kwezakhiwo okusimeme, futhi ngesinye isikhathi ngaze ngacabanga nokuba umqambi womculo ogxile kwezemvelo (wonke umuntu ubonga ukuthi umuntu uphile isikhathi esifushane)! Yize ngangithanda umzuzu nomzuzu kulawo mathuba, alikho nelilodwa elenza ngazizwa ngivuselelekile njengoba ngenza ngenkathi ngifunda ukudla okusimeme nemfundo.
Isithombe esivela e-Arches National Park, sithathwe ohambweni lokuthatha izithombe engilwenze ngoJanuwari odlule
Dlulela phambili kuDisemba 2020, lapho ngiphothula iMacalester ngeziqu ze-Environmental and Educational Study ngokugcizelela kumaSustainable Food Systems. Ngokungaqiniseki okungaka, bekuyisikhathi esijabulisayo nesikhathaza kakhulu ukungena emsebenzini.
Ngangijabule ukufaka isicelo se-EcoFellowship ye-CET ngoba ngangizithanda izinhlobo ezahlukahlukene zezinhlelo abazinikezayo, kusuka ekubuyiselweni kokudla kuya ekufundweni kokucwaningwa kwamandla emakhaya. Bengifuna ukufunda okuningi ngangokunokwenzeka ngezixazululo ezisebenzayo nezisuselwa enkingeni yesimo sezulu. Yize sesiqalile nje, usuku ngalunye ngizizwa sengathi nginomuntu osebenzela ukuphendula izingqinamba zemvelo. Iqembu lamukela ngendlela eyisimanga futhi lihlala lisikhuthaza ukuthi sibuze imibuzo, okungangabazeki ukuthi izokhulisa ilukuluku lami. Ngijabule kakhulu ukuba yi-EcoFellow kwa-CET futhi ngijabule kakhulu ukubona ukuthi lo nyaka usisa kuphi!
UFatin S. Chowdhury
Ikhaya lami belilokhu liyiNew York City- mhlawumbe laziwa kakhulu ngamabhilidi alo amakhulu kunemvelo. Kodwa-ke, ukholo lwami lwamaSulumane kanye nezici zedolobha, njengamapaki alo amangalisayo, kungigcine ngixhumene nolwazi lwesayensi nokubaluleka kokuphathwa kwemvelo.
Ngemuva kokufunda eHunter College High School, ngangenela izifundo zeBiology ngathola iziqu ze-Anthropology eStony Brook University. Lokhu okuhlangenwe nakho kwaqinisa uthando lwami ngeLong Island. Esiwombeni sami sokugcina, ngaphambi kokuba amakilasi avele okwesikhashana, ngikwazile ukuthatha isifundo seMarine Mammal ne-Sea Turtle Rehabilitation esikhungweni esihle esiseSouthampton. Leli klasi lafundiswa nguSolwazi Maxine Montello, onguMqondisi eNew York Marine Rescue Centre. Kwangidumaza ukufunda okuningi kuye ngezindlela eziningi abantu abasongela ngazo impilo yasolwandle. Kubandakanya izinto ezinjengokudala imfucuza ngokweqile. Njengalokhu, ngenza isinqumo sokulwa nokucekelwa phansi kwemvelo ngokufinyelela ebantwini, ngemfundo nangezinye izenzo.
Isithombe esivela ku-NYMRC sea tur lab, esithathwe nguDkt. Kurt Bretsch
Ngemuva kokuphothula iziqu, ngachitha isikhathi esithile njengomeluleki kuqala ngohlelo lweMassachusetts Institute of Technology's Full STEAM Phambili, ngalandela nohlelo lwabo lwe-Afterschool-tastic, ngisebenza nabasesikoleni esiphakeme futhi ikakhulukazi abafundi abasebancane, ngokulandelana. Ikharikhulamu yohlelo lokuqala ibigxile ezifundweni ezihleliwe, kuyilapho ikharikhulamu ye-Afterschool-tastic isezandleni zabeluleki. Ngakho-ke, ngithathe isinqumo sokufundisa ngezihloko ezahlukahlukene ezibandakanya imivubukulo, umlando wesintu, kanye nama-biodegradable.
Ngokushesha ngemuva kwalokho, ngathola i-CET namathuba ayo ku-Idealist, iwebhusayithi engangiyijwayele ukuyihlwaya ukuze ngithole umsebenzi omuhle oqonde ushintsho. Ngibusiswe kakhulu ukuthola lokho nje nge-EcoFellowship! I-CET iyaqhubeka nokwethenjelwa ukuthi yenze umsebenzi wokubamba iqhaza ekusetshenzisweni kwemfucuza namandla. Kuyaqondakala ukuthi kungani Isikhungo se-Ecotechnology besikhona amashumi eminyaka. Ngijabule kakhulu ukuthi umsebenzi wayo uhlobene nezehlakalo ezifana neZero Waste nokwenyuka kokunyakaza kokusebenza kahle kwezakhiwo. Kuyangijabulisa ukuthola ukuthi umnyango ngamunye kwa-CET unikela kanjani kuma-CET umsebenzi.
Ngokuzayo, ngifuna ukubhalisela amalungu omndeni kanye nohlelo lokuzithandela olusebenza nama-orangutan e-Indonesia, ngixubanisa ukuthanda kwami ​​imvelo nokusindisa izilwane. Ngokuya ngezifiso zobungcweti, ngithanda ukusebenzisa amakhono ehlukene engiwahlakulelayo ngokusebenzela i-Centre for Ecotechnology njenge-EcoFellow ukuze ngibe umholi emkhakheni onjenge-bioplastics noma wokongiwa kwemvelo.
Isipiliyoni se-EcoFellowship: I-Ozette Ostrow
Januwari 22nd, i-2021 | 0 Amazwana
Isipiliyoni se-EcoFellowship: UJared Shein
Januwari 20th, i-2021 | 0 Amazwana
Hlangana ne-EcoFellows ka-2020-2021!
Septhemba 4th, 2020 | 0 Amazwana